तालिवान शान्ति वार्ता: नयाँ राउन्डबाट के आशा गर्ने?::Jalpa Khabar
तालिवान शान्ति वार्ता: नयाँ राउन्डबाट के आशा गर्ने?
Published on: २२ भाद्र २०७७, सोमबार ०२:३९
कतारमा फेब्रुअरीमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षरमा संलग्न अमेरिकी र तालिबानी अधिकारीहरूले यसलाई “शान्ति सम्झौता” भनेर सम्बोधन गरेन।
त्यसपछिका हप्ताहरूमा यो किन स्पष्ट थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सेनामा विद्रोहीहरूले आक्रमण गर्न रोके पनि अफगान सुरक्षा बलसँग युद्ध लडिरहे।
यो सम्झौताले अफगानिस्तानबाट विदेशी सेना फिर्ता लिनको लागि एक अस्थायी समयतालिका तय गर्‍यो, जसले तालिबानलाई प्रदान गर्‍यो कि अल कायदा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जिहादी समूहहरूलाई अमेरिका वा यसका सहयोगीहरूलाई आक्रमण गर्न आफ्नो क्षेत्र प्रयोग गर्नदेखि रोक्दछ।
यसले अफगान सरकार र अन्य अफगान नेताहरूसँग पहिलोपटक राजनीतिक सम्झौतामा पुग्न प्रयास गर्न प्रत्यक्ष वार्ता सुरु गर्न तालिबानलाई प्रतिबद्धता जनायो।
ती वार्ताहरू अब कतारमा यस हप्ता शुरू हुने भएको छ, दुई दशकको युद्ध र हजारौंको ज्यान गुमाउने लक्ष्य राख्ने। ती मार्चमा सुरु हुने थियो, तर बरु कैदी विनिमय योजनाको बारेमा झगडा गरेर महिनौंसम्म पक्राउ गरियो।
विगतमा उनीहरूको कट्टर अडानको बाबजुद पनि तालिबानी अधिकारीहरूले उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकतालाई महत्त्व दिने कुरामा जोड दिएका छन्। १९९० को दशकमा थोरै देशहरूले मात्र उनीहरूको शासनलाई मान्यता दियो र उनीहरूले सम्पूर्ण देशलाई कब्जा गर्न सकेनन्। अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गरे पनि तालिवानले कुनै शहरी केन्द्रको नियन्त्रण राख्न सकेको छैन।
युरोपेली युनियनले विशेष गरी जोड दिएको छ कि भविष्यमा कुनै पनि सरकारले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गरेन भने लगानी र सहायता रोकिनेछ।
अहिलेसम्मको प्रगतिको गतिलाई ध्यानमा राख्दै वार्ता लामो हुन सक्ने सम्भावना छ, र तिनीहरूको नतिजा अनिश्चित छ। यद्यपि, वर्षौंको द्वन्द्वले युद्धको मैदानमा गतिरोध भन्दा केही बढी उत्पादन गरिसकेपछि उनीहरूले कम्तीमा पनि अफगानहरूका लागि शान्तिको अवसरको प्रतिनिधित्व गर्छन्
हस्ताक्षरमा संलग्न अमेरिकी र तालिबानी अधिकारीहरूले यसलाई “शान्ति सम्झौता” भनेर सम्बोधन गरेन।
युएस-तालिबानी सम्झौताले “५००० सम्म” तालिवान बन्दीहरुलाई अफगान सरकारले वार्ता अघि स्वतन्त्र तुल्याउने छन र सुरक्षाकर्मीहरुका १,००० सदस्यलाई बदलामा पठाएको छ।
यस प्रक्रियामा तालिवान कत्तिको सम्झौता गरिरहेका छन् भन्ने कुराको संकेतमा यस समूहले जोड दिएका थिए कि झण्डै ५००० कैदीहरूलाई रिहा गरिनु पर्छ र समूहले सूचिमा राखेका कैदीहरूलाई मात्र गणना गरिनेछ।
अमेरिकी-तालिबानी वार्तामा सहभागी नभएको सरकारले प्रतिरोध गर्यो। अफगानी अधिकारीहरूले आशा गरे कि उनीहरूले कैदीहरूको बदलामा तालिवानबाट केही छुट पाउने छन्। तर यसको सट्टा तालिबानले हिंसाको स्तर बढायो।
युएस-तालिबानी सम्झौताको एनेक्सिस, कहिले सार्वजनिक गरिएको थिएन, लडाईको केहि सीमा तोक्ने उद्देश्यले थियो। एक राम्रो स्रोतका अनुसार, तालिबानीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन गर्न अनुमति दिइयो, तर प्रमुख शहरहरूमा होइन।
यसै बीच अमेरिकाले केवल शिविर वा गाउँहरूमा आराम गर्ने तालिवान लडाकुहरूलाई नभई सक्रिय युद्धक्षेत्रका सञ्चालनहरूको निश्चित दूरीमा मात्र हवाई हमला गर्न अनुमति दिनेछ। यसबाट तालिवानले टाढाको चौकीमा काम गर्ने अफगान सेनामाथि आक्रमण गर्न स्वतन्त्र छोडे।
जे भए पनि यस समूहले कहिलेकाँही केही शहरहरूमा ठूलो मात्रामा हमला गरे र अमेरिकीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउलान् भनेर पर्खाइमा रहे र अफगान सरकारमाथिको दबाबलाई बढाए। सरकार समर्थक व्यक्तित्वहरूमा लक्षित हत्याका प्रयासहरू पनि भएका छन् जसमध्ये धेरै शंकास्पप्द रूपमा दावी नगरेका छन्।
अन्ततः राष्ट्रपति अशरफ घानीले कैदीहरू बाहेक सबैलाई मुक्त गरे र उनी विशेष गम्भीर अपराधका लागि जिम्मेवार थिए भन्ने आरोप लगाए।
उनीहरूलाई रिहा गर्ने निर्णय भए पछि पनि ढिलाइ भयो। केही हदसम्म अफगान सरकारले तालिवानले पक्राउ परेका धेरै सिपाहीहरुलाई पनि रिहा गरिनु पर्ने माग गरेको थियो किनभने फ्रान्स र अष्ट्रेलियाले उनीहरूको नागरिकलाई मार्ने मुठ्ठी कैदीहरूलाई रिहा गर्नमा आपत्ति जनाएको थियो।
अमेरिका, तथापि, बढ्दो निराश भयो र बाँकी कैदीहरू गत हप्ता रिहा गरियो, जबकि विदेशी सेनामाथि आक्रमणमा संलग्न सातलाई कतारमा पठाउने योजना बनाइएको छ, जहाँ उनीहरूको निगरानीमा राखिनेछ।
अफगानिस्तानमा कसले शासन गर्नेछ?
अमेरिकी सैनिकहरू बाहिर निस्केर तालिवानका धेरै समर्थकहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूले कस्तो किसिमको समाज सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछन। यी वार्ताहरूले समूहको दर्शनमा पहिलो वास्तविक अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ। हालसम्म उनीहरूको नेतृत्वले “इस्लामिक सरकार” बनाउने तर “समावेशी” सरकारको आवश्यकताबारे दुबै कुरा गरिसकेको छ।
छलफल भइरहेको बेलामा तालिवानले “अन्तरिम” सरकार गठन गर्ने सल्लाह दिएका छन जुन उनीहरूको हिस्सा बन्ने छ, यद्यपि त्यसले कसरी काम गर्ने छ, र यसले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व छोड्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट छ।
विगतमा उनीहरूको कट्टर अडानको बाबजुद पनि तालिबानी अधिकारीहरूले उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकतालाई महत्त्व दिने कुरामा जोड दिएका छन्। १ को दशकमा थोरै देशहरूले मात्र उनीहरूको शासनलाई मान्यता दियो र उनीहरूले सम्पूर्ण देशलाई कब्जा गर्न सकेनन्। अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गरे पनि तालिवानले कुनै शहरी केन्द्रको नियन्त्रण राख्न सकेको छैन।